Ndị ụkọchukwu Katọlik 43 nwụrụ n'ọkwa nke abụọ coronavirus na Italy | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ndị ụkọchukwu Katọlik 43 nwụrụ n'ọkwa nke abụọ coronavirus na Italy
Ndị nchụàjà Italiantali iri anọ na atọ nwụrụ na November mgbe ha butere coronavirus, ebe istali na-enwe nsogbu nke abụọ.
Dabere na L'Avvenire, akwụkwọ akụkọ nke ọgbakọ ndị bishọp Italiantali, ndị ụkọchukwu 167 nwụrụ na COVID-19 kemgbe mbido ọrịa a na February.
Otu bishọp Italy nwụrụ kwa n'ọnwa Nọvemba. Bishọp inyeaka lara ezumike nká na Milan, Marco Virgilio Ferrari, 87, nwụrụ na Nọvemba 23 n'ihi coronavirus.
Na mbido Ọktọba, Bishọp Giovanni D'Alise nke diọcese Caserta nwụrụ n'afọ 72.
Kadịnal Gualtiero Bassetti, onye isi oche nke ọgbakọ ndị Bishọp Italiantali, na-arịasi ọrịa ike na COVID-19 n'isi ọnwa a. Ọ na-aga n'ihu na-agbake mgbe anwale ọjọọ n'izu gara aga.
Bassetti, onye achịbishọp nke Perugia-Città della Pieve, nọrọ ụbọchị iri na otu n'ụlọ ọgwụ dị na Perugia ụbọchị iri na otu, tupu ebufee ya n'ụlọ ọgwụ Gemelli dị na Rome ka ọ gaa n'ihu ịma mma ya.
"N'ụbọchị ndị a ahụwo m ka m gafere nhụjuanya nke nje site na COVID-19, enwewo m ike ịnweta mmadụ, iru eru, nlekọta a na-etinye kwa ụbọchị, na nchegbu na-enweghị ike ọgwụgwụ, site n'aka ndị ọrụ niile", Bassetti kwuru na ozi ya na diocese ya na November 19.
“Ha ga-anọ n’ekpere m. M na-ebu m na ncheta na n'ekpere niile ndị ọrịa na-ka nọ n'oge ikpe. Ana m ahapụrụ gị ndụmọdụ nke nkasi obi: ka anyị dịrị n’otu n’olileanya na ịhụnanya nke Chineke, Onye nwe anyị anaghị ahapụ anyị ma na-ata ahụhụ, ọ na-ejide anyị n’aka ya “.
Ugbu a Italytali na-enwe nsogbu nke abụọ nke nje ahụ, yana ihe karịrị 795.000 dị mma, dị ka Ministrylọ Ọrụ Ahụ Ike Italiantali si kwuo. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 55.000 anwụọla na nje a na mba ahụ kemgbe ọnwa Febụwarị.
E webatara ihe mgbochi ọhụụ na mbido ọnwa a, gụnyere mkpọchi mpaghara na mmachi dị ka ịlọta, imechi ụlọ ahịa na mmachibido iri nri n'ụlọ nri na ụlọ mmanya mgbe elekere isii nke mgbede.
Dị ka data mba si kwuo, usoro nke abụọ na-ada, ọ bụrụgodị na ndị ọkachamara na-akọ na na mpaghara ụfọdụ nke thetali ọnụ ọgụgụ ndị na-efe efe erutabeghị oke.
N’April, ndị bishọp si n’ alltali niile gara ebe a na-eli ozu iji kpee ekpere ma nye onyinye maka mkpụrụ obi nke ndị nwụrụ COVID-19, gụnyere ndị ụkọchukwu
Covid-19 ogwu: enweghị ọrụ ebube
Carlo Acutis: site na teknụzụ ozi na mbara igwe